प्लाज्मा काट्ने मेसिन छनौट गर्दा १० चीजहरू विचार गर्न
प्लाज्मा काट्ने मेसिनस्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल र एल्युमिनियम काट्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। तपाईं द्रुत र सटीक धातु काट्न सक्नुहुन्छ किनभने यो प्लाज्मा धातुबाट जलेको छ। सहि प्लाज्मा काट्ने मेशिन छनौट गर्दा हामीले १० वटा चीजहरूको लागि गाइड लेखेका छौं। यदि तपाईं पाना धातु काट्ने कुरामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, अनलाइन मेटल स्टोर जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं प्लाज्मा काट्ने मेसिनको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने कृपया प्लाज्मा काट्ने मेशिन खरीददार मार्गनिर्देश हेर्नुहोस्।
१. एयर कम्प्रेसर
प्लाज्मा काट्ने मेशिनलाई प्लाज्मा उत्पादन गर्न कम्प्रेस्ड हावा चाहिन्छ, जुन अन्तर्निहित एयर कम्प्रेसर वा बाह्य कम्प्रेस्ड एयर सप्लाईबाट प्रदान गर्न सकिन्छ। दुबै प्रकारले राम्रोसँग काम गर्दछन्, तर जब प्लाज्मा कटर छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईले निर्णय गर्नु पर्छ कि कुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। अंतर्निहित एयर कम्प्रेसर अधिक महँगो छ, तर यसको मतलब तपाईं केहि सानो काम छिटो ह्याण्डल गर्न सक्नुहुनेछ।
छनौट गर्दा प्लाज्मा काट्ने मेसिन, तपाइँले चाहानु भएको मेशीन उच्च गुणवत्ताको छ र समयको परीक्षण खडा हुनेछ। प्लाज्मा काट्ने मेशिनहरू सस्तो छैनन्, त्यसैले यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले के खरीद गर्नुहुन्छ त्यो टिकाऊ छ र भत्काउँदैन जब तपाईं महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वासयोग्य खुद्रा विक्रेताहरूबाट छनौट गर्नुहोस्। हाइपरथर्म, मिलर, लिंकन र ESAB सबै बेकर ग्यास स्टेशनमा उपलब्ध छन्
D. आयामी चाप
पायलट चाप एक काट्ने सुविधा हो जुन लामो उपभोग्य जीवनको साथ अझ स्थिर चाप प्रदान गर्दछ, किनकि तपाईं मशाल स्ट्राइक धातुको टिप बिना धातु काट्न सक्नुहुन्छ। यो उपयोगी छ यदि तपाईं रस्टिभ सेवा काट्नु भयो किनभने तपाईं धातु सफा गर्नु पर्दैन र यसलाई हिट गर्नुहुन्न। यो एक अपेक्षाकृत नयाँ नवीनता हो, यद्यपि, सबै भन्दा प्लाज्मा काट्ने मेसिनहरूमा यो सुविधा हुन्छ, सस्तो मोडेलहरू बाहेक।
त्यहाँ तीन फरक वोल्टेज विकल्पहरू छन्, प्लाज्मा काट्ने मेसिनकिन्न सकिन्छ। तपाईं कि त किन्न सक्नुहुन्छ ११V वी, २0०V वा डुअल भोल्टेज उपकरण। ११VV प्लाज्मा काट्ने मेशिन शुरुवातकर्ताहरूका लागि उपयोगी छ जसले घरमा धेरै पावर र कटौतीको आवश्यकता पर्दैन। तपाईंको घरको आउटलेटमा यी प्लगहरू, तर तिनीहरूसँग त्यति शक्ति हुँदैन। यदि तपाईंसँग २0०V इनपुट छ भने, तपाईंलाई यसलाई चलाउन जेनरेटर चाहिन्छ। यदि तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन् भने, तपाईं सजिलैसँग प्लग स्विच गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई आवश्यक पर्ने शक्ति र तपाईंको वातावरणको आधारमा।
विचार गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक धातुको मोटाई हो जुन प्लाज्मा कटरले काट्न सक्छ। तपाईंले काट्न चाहानुसक्नुहुने धातुको अधिकतम मोटाईको बारेमा सोच्नुहोस्, र त्यसपछि काट्न सक्ने मेसिन छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग बीमा छ भने, उच्च केसको लागि आवेदन दिन उत्तम हुन्छ, मात्र केसमा
विचार गर्नको लागि त्यहाँ तीन फरक डाउनग्रेडहरू छन्:
रेटेड काटि capacity क्षमता: यसले १० इन्च (आईपीएम) धातु मोटाई प्रति मिनेट काट्न सक्छ।
गुणस्तर काट्ने: तल्लो वेगमा मोटाई - यो मोटा धातु हुनेछ।
अधिकतम काट्न सकिन्छ। यो धेरै ढिलो हुनेछ र एकदम सफा काट नहुन सक्छ।
Work. कार्य चक्र
ड्यूटी चक्रले प्लाज्मा काट्ने मेसिन लगातार बोक्न सक्ने उपयोगको मात्रालाई जनाउँछ। प्लाज्मा काट्ने मेसिनको उच्च कर्तव्य चक्र एक लामो समय को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुनै पनि मेसिनको शुल्क चक्र भोल्टेज को बृद्धि संग कम हुनेछ। उत्तम ड्युटी चक्र प्राप्त गर्न कुनै पनि एम्पेरेजमा उच्चतम प्रतिशत पाउनुहोस्।
प्लाज्मा काट्ने मेशिनहरू २० पाउन्डदेखि १०० पाउण्डसम्म तौल गर्न सक्दछ र असहज औद्योगिक मेशिनहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको प्लाजमा कटर लाई काम बाट काममा लिनको लागी आवश्यक छ भने, तपाइँले केहि लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ पछाडि नलिई बोक्न सक्नुहुन्छ! तर याद गर्नुहोस्, हल्का मेशिनहरूले धातुलाई ठूलो, भारी प्लाज्मा कटर जत्तिकै काट्न सक्दैन।
Quality. गुण कम गर्नुहोस्
कटि quality क्वालिटीले सफा उत्पाद र तैयार उत्पाद काट्नेको सहजतालाई जनाउँदछ। उत्तम प्लाज्मा काट्ने मेसिनको उच्च काटने गुण हुन्छ, त्यसैले काट्ने धारिलो र सफा देखिन्छ, र सफा देखिनको लागि तपाईंले यसलाई सफा गर्न समय खर्च गर्नुपर्दैन।
Ope। परिचालन लागत
प्लाज्मा काट्ने मेसिनको उपभोग दर बिभिन्न मेसिनहरू र उपभोग्य सामर्थीहरू बीच ठूलो भिन्न हुन्छ। समयको साथ पैसा बचत गर्न तपाईंको उपकरणको उपभोग दर अध्ययन गर्नुहोस्। अल्ट्रा तातो प्लाज्मा काट्ने मेशिन महँगो छ, तर तिनीहरूको कम अपरेटिंग लागत छ, र तिनीहरूको उत्कृष्ट उपभोग्य वस्तुहरूको कारण, तिनीहरूले तपाईंलाई लामो अवधिको सञ्चालनमा पैसा बचत गर्न सक्दछन्।
१०. टार्च काट्ने
फ्लेरको लम्बाइ एक महत्त्वपूर्ण विचार हो। यदि तपाई भारी मेसिनको साथ ठूलो वर्कशपमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई लामो टार्च चाहिन्छ ताकि तपाई भारी प्लाज्मा कटरलाई नलिनकन विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं लामो समय को लागी कटौती गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक फ्ल्यासलाइट खोज्नुहोस् जुन तपाईंको हातको आकारमा फिट रहन्छ पीडा रोक्न मद्दत गर्न।